ဗဟုသုတ – Nyi Ma Lay
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ ဘဝကို အားမရလို့ စိတ်ကုန်နေသူများ ဒီပို့လေး ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ….
By Nyi Ma LayPosted on February 18, 2022
“လက်ရှိ ကိုယ့် ဘဝကို အားမရလို့ စိတ်ကုန်နေတဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ”……. ကိုယ့်ဘ ဝကိုယ် ချစ်ခင် လာဖို့ နည်းလမ်း (၁၀) ခု သူ တို့ဘဝကိုသူတို့ မုန်းတ ယ်ဆိုတဲ့လူေ တွ ရှိပါတယ်။ […]
အင်တာ နက်လိုင်း ကော င်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့ အပျော်က တခြားအပျော်ေ တွနဲ့ မတူပါဘူး။ အင်တာ နက်လိုင်း မကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ်အနှော င့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi လိုင်း မကော င်းတာက […]
နိုင်ငံတကာမှာ အများသုံး အိမ်သာ တံခါးတွေက ဘာလို့ ကြမ်းပြင်ထိ အလုံမပိတ်ထားသလဲ…သိပါသလား
By Nyi Ma LayPosted on January 23, 2022 January 23, 2022
လူတော်တော်များများက အရမ်း ညစ်ပတ်တယ် ၊ ရွံစရာေ ကာင်းတ ယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ အများသုံး အိမ်သာတံခါးတွေ ကြမ်းပြင်ထိ မရောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကတော့ ဒီလိုပါတဲ့ ခင်ဗျာ…. သင့်အနေနဲ့ အများသုံး အိမ်သာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး […]
By Nyi Ma LayPosted on January 21, 2022
အလှူဒါနပြုတဲ့သူဟာ ကိုယ်ကျင့်သီလကို စင်ကြယ်အောင် ဆောက်တည်ပြီး လှူသင့်ပါတယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့… အဝတ်အသစ်ကို ဝတ်ဆင်တဲ့သူဟာ ရေမချိုးဘဲ ဝတ်မယ်ဆိုရင် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ တင့်တယ်မှုကို မရရှိနိုင်သလို သီလမစင်ကြယ်ဘဲ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဒါနဟာလည်း၊ မတောက်ပြောင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့… ၁။ လှူဒါန်းပေးကမ်းတဲ့သူဘက်က […]
ပိုက်ဆံမ ရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ် တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ် ။ အဆင်မပြေ ဘူးလို့ ခနခ နတွေးနေရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ် လာတယ်။ ဒါ အယူအ ဆမဟုတ်ဘူး။ […]
By Nyi Ma LayPosted on January 4, 2022
လှေကား စုံ မ ထားရလို့ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ လှေကားစုံထား ရင် ခိုက်တတ်ပါတ ယ်။ ဘာကြောင့်ခိုက်လဲဆိုတာ က လူ့သဘာ ဝကြောင့်ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ်စလှ မ်းတဲ့ ခြေနဲ့ ခြေလှမ်းပြန်‌ ဆုံးတတ် […]